Coronavirus: Laba goor makugu dhici karaa fayraska Covid-19? - BBC News Somali
Waa la cusbooneysiiyay 4 Maarso 2021
Seynisyahannada Caalamka ayaa 24 saacadood shaqeynaya si ay u fahmaan waxa uu xanuunkan coronavirus yahay.
Qaar ka mid ah bukaannada ayaa ka caafimaaday Covid-19, waxaana laga fasaxay cisbitaallada, balse mar labaad ayey xanuunsadeen, markii la baarayna waa laga helay. Fayraska corona, sida hargabka caadiga ah, wuu soo noqon karaa. Hadabba maxay ku kala duwan yihiin?
Nin 70 sano jir ah, waa tusaalihii ugu horeeyay ee ah bukaan ka yaabiyay dhaqaatiirta, walwalna geliyay ogaanshaha fayraskan.
Waxaa lagu karantiilay cisbitaal ku yaalla Tokyo ka dib markii coronavirus laga helay bishii February.
Sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda Japan ee NHK, ninkaas ayaa xanuunka ka caafimaaday wuxuuna dib u billaabay noloshiisii caadiga ahayd. Balse dhowr maalmood ka dib, dib ayuu u xanuunsaday, wuuna qandhaday.
Ninkii ayaa dib loogu celiyay cisbitaalka, dhaqaatiirta iyo isagaba la yaab ayey ku noqotay. Wuxuu ogaaday in mar labaad uu ku dhacay coronavirus.
Qorshaha dowladda UK ee Covid-19 waa wajihidda dabeecadaha xanuunka iyo xoojinta difaaca jirka ee shacabka.
Inkastoo uusan keligii ku ahayn xaaladdan ee dalka Japan, haddaba weerarka rogaal celiska ah ee coronavirus waxaa la kulma dad yar, balse tiro ahaan badan. Maxay tahay sababta?
Dib u soo noqoshada fayraska
Luis Enjuanes, oo ku taqasusay fayrasyada faafa, kana tirsan machadka Qaran ee Biotechnology (CSIC) ee dalka Spain, wuxuu BBC u sheegay in ugu yaraan boqolkiiba 14 ka mid ah bukaannada oo laga daweeyay Covid-19, in markale uu ku dhacay.
Wuxuu aaminsan yahay in arrintan aysan ka dhalan in mar labaad ay fayraska qaadeen, balse waa midkii hore oo "dib u soo rogaal celiyay".
"Sharaxeedeyda, iyo sida dad kale oo badan ay u dhigi lahaayeen, waa in coronavirus uusan dadka kala soocin, balse dadka qaar difaacooda jirka waa mid aad u xoogbadan," ayuu yiri Enjuanes.
"Marka ay daciifto jawaabta uu bixinayo difaaca jirka, fayraska oo meelaha qaar ku dhuumanaya ayaa weerar kale soo qaada."
Fayraska wuu ku jiri karaa jirka
Qaar ka mid ah fayrasyada waxay isaga dhex noolaan karaan jirka, seddax bilood iyo in ka badan.
Sida Khubarada ay sheegeen, illaa 14% boqolkiiba bukaanada ka caafimaada coronavirus, markale way la xanuunsan karaan.
"Marka qofka laga waayo fayraskii uu la xanuunsanaa, waxaa loo qaataa in jirkiisa uu iska difaacay fayraskaas, uusanna dib u soo noqoneyn," ayuu hadalka ku daray Enjuanes.
"Balse caabuqyada qaar ee fayraska uu ka tago ayaa jirka ku sii dhex noolaan kara, kuwaas oo ka dhuunta unugyada difaaca jirka".
Balse waxaa jiro arrin ku saabsan Covid-19 oo soo jiidatay seynisyahannada: Muddada kooban ee u dhexeysa marka uu bukaanka ka bogsado fayraska, haddana isla markiiba markale la xanuunsada.
Waan ognahay in unugyada difaaca jirka ay u shaqeeyaan qaabab kala duwan oo ay uga hortagaan xanuunada.
Tusaale ahaan, jadeecada oo hal mar qofka laga tallaalo marka uu yaryahay, way ku filan tahay jirkana wuu iska celin karayaa. In kastoo culimada caafimaadka qaar ka mid ah ay ku talinayaan in dadka qaar ee waaweyn ay u baahan karaan in la siiyo tallaalka casriga ah si aysan ugu dhicin jadeeco markale.
Waxaa jiro fayrasyo kale oo tallaalka aan looga hortagi karin, taas oo dhalineysa in qofka uu dhowr goor qaato ama difaaca gudaha uu xoojiyo.
Waxaa sidoo kale jira talaalo kale, tusaale ahaan, midka hargabka xun ama midka iska caadiga ah, taas oo sannad kasta la qaadan karo si soo noqnoqoshada fayraska looga hortago.
Fahanka weli la raadinayo
Maadaama uu Covid-19 weli cusub yahay, seynisyahannada waxay weli isku deyayaan in ay fahmaan sharaxaadda ah in hal qof uu laba goor oo isku dhow uu ku dhaco fayraskan.
Isidoro Martínez, oo ah cilmi baare ka tirsan Machadka Caafimaadka ee Carlos III, e ku yaalla magaalada Madrid, wuxuu sheegay in inkastoo dib uu u soo noqon karo coronavirus, in haddana in layaab iyo wax cusub in ay tahay in Covid-19 oo si degdeg ah u soo rogaal celinayo.
In inkastoo dib uu u soo noqon karo coronavirus, in haddana in layaab iyo wax cusub in ay tahay in Covid-19 oo si degdeg ah u soo rogaal celinayo
"Haddii uu daciifo difaaca jirka, mar kale haddii xanuun kale bilowdo, waa arrin iska caadi ah in qofka uu markale ku dhaco.
"Laakiin, waa arrin naadir ah in qofka marlabaad laga helo isla fayraskii, isla markii laga daaweeyay. Sidoo kale, inta aan ka war-hayno, fayraskan corona isma badalo sida hargabka kale ee caadiga ah," ayuu hadalka ku sii daray.
Cilm baaris caafimaad
Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO)
Cudurka corona fiiri qaabka uu jirkaaga isaga difaaci karo
Coronavirus: "Qalabkan ka fogow si internet-kaaga uu xawaare u yeesho"
Afar arrimood oo Fahad Yaasiin uu sameyn karo soo noqoshihiisa ka dib
TOOS Halkee ayay marayaan dadaallada la isugu soo dhaweynayo Farmaajo iyo Rooble?
Dalka keliya ee seddax sano jiray ka dibna baaba'ay